Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Boeing ichaza uSekela Mongameli omtsha wokuSebenza kukaRhulumente
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
UZiad S. Ojakli otyunjwe njengo-Sekela Mongameli we-Boeing kwimisebenzi karhulumente
UZiad S. Ojakli otyunjwe njengo-Sekela Mongameli we-Boeing olawula ukusebenza kukarhulumente ngo-Okthobha 1, 2021.
U-Ojakli uza kukhokela iinzame zomgaqo-nkqubo ka-Boeing, asebenze njenge-lobbyist eyintloko, kwaye abeke iliso kwi-Boeing Global Engagement.
U-Ojakli uza kunika ingxelo kuMongameli we-Boeing kunye ne-CEO uDavid Calhoun kwaye uza kusebenza kwiBhunga eliLawulayo le-Boeing.
Inkampani yaseBoeing namhlanje ibize uZiad S. Ojakli njengesekela-mongameli olawulayo wenkampani esebenza ngo-Okthobha 1, 2021.
Kule ndima, u-Ojakli uzakukhokela iinzame zomgaqo-nkqubo ka-Boeing, asebenze njenge-lobbyist eyintloko kushishino lwehlabathi, kwaye abeke iliso kwi-Boeing Global Engagement, umbutho wenkampani opha ububele emhlabeni jikelele. Uya kunika ingxelo kuMongameli we-Boeing kunye ne-CEO uDavid Calhoun kwaye uza kusebenza kwiBhunga eliPhezulu lenkampani. Kule ndima, u-Ojakli ulandela uMarc Allen, iBoeingIGosa eliyiNtloko lesiCwangciso-qhinga, elisebenze njengesekela lethutyana lesekela likamongameli wemiSebenzi kaRhulumente ukusukela kule nyanga iphelileyo kaJuni.
"UZiad sisigqeba esingqiniweyo esinengxelo ebambekayo yomgaqo-nkqubo woluntu kunye nemisebenzi yobudlelwane kurhulumente kwiinkampani zehlabathi," utshilo uCalhoun. “Amava akhe abanzi okusebenza kwindima yesigqeba kurhulumente nakwicandelo labucala liza kuba negalelo kuthethathethwano lwethu nabachaphazelekayo njengoko siqhubeka ukugxila kukhuseleko, kumgangatho nasekuhleni, nasekuguquleni inkampani yethu kwikamva. Ndifuna nokubulela uMarc Allen ngobunkokheli bakhe obunempembelelo kumbutho wethu wokuSebenza kukaRhulumente kwezi nyanga zidlulileyo nanjengoko iqhubekile nokuqhubela phambili imigaqo-nkqubo yenkampani yethu. ”
U-Ojakli uyajoyina iBoeing ukulandela ikhondo eliyimpumelelo nelohlukileyo kwimisebenzi yobudlelane kurhulumente wehlabathi kwimizi-mveliso yezithuthi neyezezimali ukongeza ekusebenzeni ngaphakathi INdlu yeNdlu Ulawulo lowayesakuba nguMongameli waseMelika uGeorge W. Bush.
Kutshanje, u-Ojakli usebenze njengeqabane elilawulayo kunye nosekela mongameli omkhulu weSoftbank ukusuka kwi-2018-20, apho wayila khona kwaye wakhokela inkampani yokuqala yotyalo mali ekusebenzeni kwemicimbi kurhulumente ukuxhasa yonke imithetho, ezolawulo nezopolitiko zenkampani. Phambi kokujoyina iSoftbank, u-Ojakli uchithe iminyaka eli-14 eFord Motor Company njengesekela mongameli weqela, apho akhokele iqela lehlabathi elikhulise iinjongo eziphambili zeshishini kunye nokulawula ukusebenzisana noorhulumente kwiimarike ezili-110 kwihlabathi liphela. Kwelo candelo, wayalela nengalo kaFord yokupha enikelwe ekuxhaseni izizathu zehlabathi.
Ngaphambili, u-Ojakli ebesebenza kwifayile ye- INdlu yeNdlu njengoSekela-nqununu kwiMicimbi yoWiso-mthetho kaMongameli George W. Bush ukusukela ngo-2001-04. Kwangoko, u-Ojakli wayeyiNtloko yaBasebenzi kunye noMlawuli woMgaqo-nkqubo weSenator yase-US uPaul Coverdell kwaye waqala umsebenzi wakhe kwi-ofisi yeSenator yase-US uDan Coats.
U-Ojakli ngoku ungusihlalo weBhodi ye-Smithsonian's National Zoological Park eWashington, DC kwaye ulilungu lebhodi yeJackie Robinson Foundation.
U-Ojakli ubambe isidanga se-bachelor kuRhulumente waseMelika kwiYunivesithi yaseGeorgetown.